Ny Vehivavy rosiana dia nankasitraka manerana izao tontolo izao, isan’izany ny any amin’ny firenena arabo, sy ny firenena any Afrika, fa dia tsara tarehy, rosiana vehivavy ireo koa dia liana amin’ny silamo ny olona, ny arabo, afrikana. Ny fahamarinana dia ho gaga anao: raha ny marina, ny tsara tarehy, rosiana sy okrainiana vehivavy no tena nentim-paharazana eo amin’ny fifandraisan’ny fianakaviana.
Dia nilaza ihany koa izy fa tia ny olona amin’ny resaka bika aman’endriny, ny kolontsaina, sy ny fivavahana toy izany, fa ny saina dia tsy fanavakavahana, ny marimarina kokoa, izy ireo no traditionalists. Izany rehetra izany dia midika fa raha, ohatra, ny lehilahy iray arabo fiaviana monina any Eoropa nandritra ny fotoana ela, raha efa afa-po ny eoropeana toe-tsaina, dia mety rosiana sy okrainiana vehivavy.
Ireo lehilahy ireo dia amporisihana mba hisoratra anarana ao amin’ny habaka Uréine
Mbola misy hatrany ny isan’ny okrainiana vehivavy izay mankasitraka be dia be ny soatoavin’ny silamo ny lehilahy: tsy mety ny toaka, ny fanajana ny vehivavy.
Nefa koa, izay toy ny miaina ao amin’ny toerana mihaja toy Dubai na Doha any Afovoany Atsinanana
Isika dia manomana ny mpitari-dalana izany dia mamela ny silamo ny lehilahy, ny afrikana, ny arabo sy ny hihaona tsara tarehy, rosiana, izay liana amin’ny fivoriana iraisam-pirenena silamo. Mpitari-dalana io dia hanompo amin’ny maha-fitaovana mba hifandray vehivavy rosiana ho maimaim-POANA, satria fantatray tsara fa ny fidirana ho any amin’ny karama asa an-tserasera dia voafetra ao aminà firenena afrikana maro, na ny arabo. Mandra-ny famoahana ireo MPITARI-dalana, ny vehivavy Okraina fihaonana ho an’ny Tompokovavy arabo sy ny afrikana, manasa anao izahay mba handao ny adiresy mailaka amin’ny maha-foto-kevitra ny hafatry Ny dika mitovy ny Mpitari-dalana. Mba hahazo ny tari-dalana maimaim-poana ny fandraisana anjara dia ny fitsidihana ny mombamomba ny rosiana hatsaran-tarehy na okrainiana ny namany sary, ary tsindrio eo amin’ny toy ny bokotra Facebook
Chat arabo Mampiaraka Zanakao maimaim-Poana Tsy misy Fisoratana anarana →